Otu esi agba ọsọ ule A / B na peeji nke ọdịda gị | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 16, 2014 Tọzdee, Disemba 16, 2014 Douglas Karr
Lander bụ ihe ntinye ọnụ maka ihu igwe dị ọnụ ala yana nnwale A / B siri ike dị maka ndị ọrụ iji mee ka ọnụego gị gbanwee. Nyocha A / B na-aga n'ihu na-abụ usoro egosipụtara nke ndị ahịa na-eji na-apịgharị ntụgharị ndị ọzọ site na okporo ụzọ dị ugbu a - ụzọ dị ukwuu iji nweta azụmaahịa na-enweghị itinye ego karịa!
Gịnị bụ ule A / B ma ọ bụ Gbasaa Ule
Nyocha A / B ma ọ bụ nkewa nkewa dị ka ọ dị, ọ bụ nnwale ebe ị na-anwale nsụgharị abụọ dị iche iche nke ibe ọdịda n'otu oge. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa ntinye nke usoro sayensị na mbọ ị na-agba n'ịntanetị.
Otu igodo iji hụ na ị nwere data dị mkpa iji kwado nsonaazụ ya bụ ịtụ ụda nke ndị ọbịa na ntụgharị, yana ịgbakọ ma enwere mmakọ ọnụ ọgụgụ na ule ahụ. KISS Metrics na-enye nnukwu primer na Olee otu ule A / B si aru oru nakwa dị ka ngwá ọrụ maka na-agbakọ mkpa nke nsonaazụ.
Na mkparịta ụka nnwale A / B ha na-emekọrịta, Landers na-agagharị onye ọrụ site na ịga nke ọma na-anwale ihu ọdịda ha ma na-enye akụkọ banyere nsonaazụ:
Na-anwale otu ihe n'otu ule dịka nhazi, isi okwu, isiokwu dị n'okpuru, ịkpọ oku, agba, nleba anya, onyonyo, vidiyo, ogologo, nhazi yana ọbụlagodi ụdị ọdịnaya.
Họrọ ihe ị ga-anwale ma zụlite nsụgharị dị iche iche dabere na omume onye ọrụ gị, omume kachasị mma, na nyocha ndị ọzọ. Cheta, naanị otu mmewere n'otu ule kwesiri itinye ya ma nwalee ya.
Gbaa ule ahụ ogologo oge iji nweta mmesi obi ike nke nsonaazụ, ma jide n'aka na ị ga-akwụsị ule ahụ ma tinye ụdị mmeri gị ozugbo o kwere omume iji bulie ntụgharị.
Site na ngwa Lander, ị nwere ike ịmepụta ma nwalee ụdị atọ dị iche iche nke ibe ọdịda ọ bụla n'otu oge. Nke ahụ pụtara na ị ga-enwe ike ịmepụta ụdị dị iche iche nke ibe ọdịda gị n'okpuru otu URL ahụ.
Tags: ab ulelanderọdịda peeji uleule peejigbawara n'etiti ule
Ndewo Douglas! Daalụ maka ịkọwa etu esi agba ọsọ AB Nnwale nke Ibe ọdịda iji Lander. Nnukwu nkọwa na ndụmọdụ bara uru! Anyị na-akpọ ndị na-agụ akwụkwọ gị ka ha nwalee Ọnwụnwa Ọnwụnwa ụbọchị 30 ma bulie peeji ha maka ọdịda. Banyere!